Ibe yimpumelelo ingqungquthela yezindlu | News24
Ibe yimpumelelo ingqungquthela yezindlu
Imeya yomkhandlu iLembe uSduduzo Gumede ethula inkulum yakhe kulengqunguthela ibikwaMaphumulo.
UMKHANDLU kaMaspala wesifunda iLembe ubambe ingqungquthela yezinsuku ezimbili ebibizwa nge Human Settlement Sumit KwaMaphumulo kusukela ngolwesine zi-7 kuya ku-8 kuNhlangulana ukuzodingida izinqinamba ekunikezeleni ngezindlu.
Lengqungquthela ibihlose ukuthuthukisa amaxhamu okuxhumana ohlelweni lokunikezelwa ngezindlu ngokuvula inkundla yokucobelelani ngolwazi kulabo ababandekanyayo kulomkhakha.
Lapha singabala imikhandlu engaphansi kweLembe, uCOGTA eKZN Umnyango wezoKuhlaliswa kwabantu, u Eskom, Housing development Agency, First National Bank kanye neLembe Chamber of Commerce.
Ethula inkulumo yakhe uMeya weLembe uSduduzo Gumede uthe sekukuningi okuzuziwe ekunikezeni kwezindlu ezisezingeni kulesi sifunda.
“Isibalo esikhulu sabantu bakkithi basahlala ngaphansi kwezim ezingezinhle neze nezinqalasizinda ezingekho ezingeni. Ukunikezelwa kwezindlu kubuye kuphazanyiswe nakungatholi uxhaso lwezimali olwanele, ukungaxhumani ngendlela kwezinhlaka zikahulumeni, nokungahleli ngendlela kwemisebenzi,” kubeka uGumede. Lomcimbi ubuzimaziswe ilowo oyihloko ymnyango wezemisebenzi yomphakathi uMduduzi Zungu nokhulumele u umpathiswa uRavi Pillay nothe komele kubhekwe ngale kohulumeni basekhaya ukubhekana nezinqinamba ezibhekene nemiphakathi.
Kube sekunikezelwa ngendlu komunye wemindeni ophethwe nganbantwana wakwaMdletshe kwa ward 10 kwaMaphumulo. Ekhulumela lomndeni uSthembile Mdletshe ubonge wanconcoza kuhulumeni ehluleka nanokubamba izinyembezi.
“Siyajabula ukuba sibe nekhaya elisemgangathweni mina nomndeni wami sizizwa sesifudumele njengoba umuzi omdala ubungekho esimweni,” usho kanje.
Lengqunquthele ibe sidlulela osukwini lwesibili nalaho kudingidwe kabanzi izindaba nezinqinamba ezimbekeni nalomnyango, uxhaso, ukubuyiswa komhlaba njalo njalo. Esevala loyo okhulumela umkhndlu weLembe uLucky Makhathini uthe iziphathimandla kumele ngaso sonke isikhathi sibeke abantu kuqala sihambise ngokweBatho Pele nsuku zonke.